मलाई राम्रो तरिकाले पङ्क्तिबद्ध गर्न कति वटा लिंकहरू छन्?
म भर्खरै धेरैजनाले सोधेका थिए कि मेरो आफ्नै वेबसाइटको लागि कति पटक लिंकहरू छन्. के यो सरल प्रश्नले जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ? मलाई विश्वास छ कि प्रत्येक विशिष्ट मामला को लागी व्यक्तिगत रूप देखि विचार गर्न को लागि धेरै चर हो. मैले कति पटक लिंकहरू राखेको छु? राम्रो, एक पटक फेरि - त्यो निर्भर गर्दछ. र प्रत्येक एकल वेबसाइटलाई पहिले पूर्ण फोटो प्राप्त गर्न आकलन गरिएको हुनुपर्छ. वास्तवमा, तपाईंको आफ्नै ब्याङ्कलिङ्क गणना सधैँ धेरै फरक पक्षहरूमा निर्भर रहनेछ. मेरो मतलब छ कि तपाईंको प्राथमिक व्यावसायिक उद्देश्यहरु को बाहेक, तपाईंको पछाडिको लागि कुनै पनि निश्चित लक्ष्य सेट निश्चित रूपमा एक नगर्ने कुरा हो. त्यहाँ कुनै पनि गोल सेट गर्न आवश्यक छैन, कुनै पनि उचित लिङ्क निर्माण रणनीति अनुरूप हुनुपर्छ. ई. , को रूप मा लगातार र स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुन सकेन.
गुणवत्ता बनाम. मात्रा
यसलाई सादा अंग्रेजीमा राख्नु, यसले कुनै पनि वास्तविक अर्थ गर्दैन. निस्सन्देह, मेरो ब्याकलिङ्क काउन्टर इन-पार्टमा निर्भर गर्दछ कि म आफ्नो वेबसाइट संग प्राप्त गर्न को लागी जाँदैछु, अर्थात् कीवर्ड, रैंकिंग, र आगंतुक गिनती को लक्ष्य. वास्तव मा, यो केहि केहि सामान्य स्थिति हो जब एक व्यवसाय वेबसाइट को स्थान मा राम्रो तरिकाले रैंक गरिएको छ - केहि केहि लिंकहरु.
निस्सन्देह, दिइयो कि तल्लो तख्ताको मात्रामा कुनै तल्लो कीवर्ड प्रतियोगिता छैन. त्यो तरिका, तथापि, त्यस्तो वेबसाइटले स्पष्ट रूपमा धेरै प्रयोगकर्ता भ्रमणहरू गर्दैन. यद्यपि, ब्याकलिङ्कहरूको औसत गणनामा हामी कम से कम अधिक वा कम सटीक अनुमान पाउन सक्छौं. सामान्यतया, एक अपेक्षाकृत सानो अनलाइन व्यापारको बारेमा 50 को गुणवत्ता ब्याकलिङ्कको साथ सुरू गर्नु पर्छ. यसको एसईओ अभियान र समग्र विकास संग चलिरहेको छ, म व्यावहारिक रूपमा भन्न सक्छु कि यो परियोजनाले यसको रैंकिंग स्थितिको आशा गर्न सक्नेछ जुन जुनसुकै शीर्ष पाँच खोज परिणामहरु मा देख्न सकिन्छ।.
त्यसोभए, म कसरी कति ब्याकलिङ्कहरू गरिरहेको छ भनेर सोच्नुको सट्टा, तपाईले सुनिश्चित गर्नुहुनेछ कि तपाईंको अवस्थित ब्याकलिङ्क प्रोफाइल कम्तिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुणस्तर मापदण्डको कम्तिमा आधा भेट्छ।. यहाँ शीर्ष गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरूको बारेमा बुलेट प्वाइन्टहरूको सूची हो:
प्रत्येक backlink विशुद्ध रूपमा प्रासंगिक छ
लङ्ग पाठको साथ एक विश्वसनीय वेबसाइटबाट आउँछ। एक सटीक वाक्यांश वा कुञ्जीपाटी म्याच
ब्याकलिङ्कहरू पृष्ठ-सामग्रीमा क्रमिक रूपमा सम्भव रूपमा
विभिन्न ब्याकलिङ्क पोर्टफोलियोको रूपमा समावेश गरिएको छ (i. ई. , धेरै फरक ठाउँहरु बाट आउदै आएको छ)
गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू न त पारस्परिक हुनुपर्छ, न त भुक्तानी भएका व्यक्तिहरू
यसरी, तपाईले उनीहरूको गुणस्तरको सट्टामा ब्याकलिङ्क नम्बरमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दैन।. यद्यपि, यो एक व्यापक धोखा छ भन्ने विश्वास छ कि सबै ब्याकलिङ्कले समान मान पाएको छ. वास्तवमा, एक कार्बनिक गुणस्तर backlink हुन सैकड़ों अप्रासंगिक वा कम गुणस्तर को बिरुद्ध प्रायः अधिक उचित हुन सक्छ. यही कारणले तपाइँलाई तपाइँको ब्याङ्कलिङ्क गणनाको बारेमा सबै आवश्यक पर्दछ वास्तविक मूल्यको विरुद्ध उनीहरूको सामान्य संख्या बीचको एक स्वस्थ ब्यालेन्स कायम राख्न.
सबै पछि, तपाइँले अघिल्लो उल्लिखित प्रमाणिकरण प्रक्रियामार्फत प्रत्येक ब्याकलिंकलाई दिनुभएको छ, म तपाईंको साइटमा अनुकूलन जाँच गर्न सिफारिस गर्दछु।. निस्सन्देह, त्यहाँ कार्यहरूको एक विशाल दायरा लिइएको छ, तर तपाइँ छिट्टै कम्तिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईको ब्याकलिङ्क गणनालाई सीधा असर गर्दछ।. सबैभन्दा पहिले, सबै अनावश्यक आउटबाउन्ड लिङ्कहरू हटाउनुहोस्, साथै 301 पुन: निर्देशितहरू हटाउनुहोस्. अर्को, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पृष्ठ वा ल्यान्डिङ पृष्ठबाट पाँच क्लिक भन्दा टाढाको पृष्ठहरू मा रहेका कुनै पृष्ठहरू छैनन्. साथै, शीर्ष महत्वको तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा इनबाउन्ड लिङ्क थप्न काम गर्दछ. सबै पछि, अनुसूचित चेक-इन प्रक्रियाको लागि बिर्सनु नपर्ने प्रत्येक समयको बिग्रिएको लिंकमा छिटो-फिक्स गर्न Source .